Google က Pixel ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
Google က Pixel ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါ Pixel တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကိရိယာ. Google ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲတစ်ဦးကဖုန်းကို, Android ရဲ့ထုတ်လုပ်သူ. အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲကိုဘက်ထိပ်ပိုင်းထစ်ဖြစ်ပါသည်: အ smoothest, နောက်ဆုံးပေါ်အကောင်းဆုံးယခုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်ပါက Android ဗားရှင်း optimized နှင့်အများဆုံးဖြစ်နိုင်အနာဂတ်သို့, အဘယျသို့လျင်မြန်စွာ updates တွေကို Google ထံမှဖြောင့်လာမယ့်အတူ.
ခြစ်ရာကနေ Google ကဒီဇိုင်းပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းအများအပြား boxes တွေကိုလူမိုက်ကံကောင်း, သို့သော်အချို့ beater အတော်လေးကြယ်တို့၏ကမ္ဘာမျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါ, မပါ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Google က Pixel ပြန်လည်သုံးသပ်: တစ်ဦးက iPhone beater သော်လည်းမအတော်လေးတစ်ဦးက Android ရှငျဘုရငျကို” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, ကြာသပတေးနေ့ 20th အောက်တိုဘာလအပေါ် theguardian.com များအတွက် 2016 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Google ကတစ်ဦးရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်စမတ်ဖုန်းနောက်ဆုံးတော့စတင်ပေးခဲ့ပါတယ်, အပစ်စယ်လ်, အပေါ် Apple ကဦးခေါင်းကိုစိန်ခေါ်နှင့်အမှန်တကယ်လုပ်တဲ့သူကိုလူအားဖြင့် Software ကို လိုက်. ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူတစ်ပရီမီယံက Android အတှေ့အကွုံပေး။.
အသစ်စမတ်ဖုန်းထုတ်ကုန် Google ရဲ့ Nexus လိုင်းအောင်မြင်နှင့်ကုမ္ပဏီ Pixel ယခုကြောင်းဆို 100% Google က, Google ကဆော့ဖ်ဝဲကိုထောက်ပံ့ပေးနှင့်အချို့သောထုတ်ကုန်သို့ input ကိုဒါပေမဲ့စုစုပေါင်းမဟုတ်ထိန်းချုပ်ခဲ့ရှိရာကို Nexus ထုတ်ကုန်နဲ့မတူပဲ. အဆိုပါ Pixel ဖုန်းကို Google ရဲ့ပထမဦးဆုံး In-အိမ်သူအိမ်သားထုတ်ကုန်အဖြစ် Pixel ကို C အန်းဒရွိုက်တက်ဘလက်နှင့် Chromebook Pixel ပူးပေါင်းမည်.
သို့သော် Google အတွက်, အပစ်စယ်လ့်စမတ်ဖုန်းမဟုတ်, တကယ့် ရှိမရှိ Google တွင်ဆန္ဒခံယူပွဲ တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်ရောင်းချအဖြစ်.
အဆိုပါ Pixel တစ်အဆုံးမှာထူသည်, တစ်စုံတစ်ဦးကထောက်ပြမဟုတ်လျှင်သျောလညျးသငျသတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူး. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
တစ် All-သတ္တုကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အတူ, All-ဖန် display ကို, ကျောက်အစိုင်အခဲတည်ဆောက်, လက်ဗွေစကင်နာများနှင့်နားကြပ် socket, အပစ်စယ်လ်ထိပ်တန်းအဆုံးစမတ်ဖုန်း၏မျှော်လင့်ထားပုံးအများစုလူမိုက်ကံကောင်း, ရေစိုခံတစ်ဦးမရှိခြင်း မှလွဲ.. ဒါဟာသိပ်ရှာဖွေနေအနည်းငယ်ကွဲပြားင်, ထိပ်မှာအထူရဲ့နှင့်မဆိုကင်မရာကိုစိမ်းဖုံးကွယ်ကြောင့်နောက်ကျောနှင့်သပ်-အသွင်သဏ္ဌာန်၏အပေါ်ဆုံးတတိယဖုံးအုပ်နေတဲ့ဖန်ခွက် panel ကိုနှင့်အတူ. ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဒီဇိုင်းအမြင်နေသောအပိုင်းသုံးပိုင်းအဖြစ်က.
အဆိုပါ Pixel လက်၌ကြီးမြတ်ခံစားရ, ချုပ်ကိုင်ဖို့ကလွယ်ကူစေအကြိုက်ဖက်ကွေးအနားနှင့်အပြားနှစ်ဖက်နဲ့မှအပေါ်ကိုင်. ဒါဟာအစလည်းအထူမယ့်, သငျသညျကိုင်အ bit နဲ့အဓိပ်ပာယျအသပ်ပုံသဏ္ဌာန်ပါးလွှာသည်နှင့်ကောင်းသောအလေးချိန်ဖြန့်ဖြူးပါတယ်အတူ.
အပစ်စယ်လ်ရဲ့ခြေရင်းနားမှာက 7.3mm အထူက 143g အလေးချိန်. ယှဉ်ပြိုင်ဖို့နှိုင်းယှဉ်လျှင်, အမည်ရ Apple ရဲ့ 7.1mm အထူ, 138ဂရမ်ကို iPhone7နှင့် Samsung ရဲ့ 7.9mm ကိုယ်ထည်အထူ, 152ဆက Galaxy S7, အ Pixel အလယ်၌တရားဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ပိုမိုပါးလွှာမယ့် 7.9မီလီမီတာအထူကို Nexus 5x နှင့်ဒါပေမဲ့ 7g သာ. လေး.
အဆိုပါ Pixel ရှေ့အပေါ်တစ်ဦး 5in ကို full HD AMOLED မျက်နှာပြင်ရှိပါတယ်, သောကရရှိနိုင်ပါသေးငယ်တဲ့ပရီမီယံစမတ်ဖုန်း၏တဦးတည်းကို, အများဆုံးအခြားသူများကို 5.1in သို့မဟုတ်ပိုကြီးဖန်သားပြင်ရှိခြင်းနှင့်အတူ. အဆိုပါ display ကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာနဲ့တက်ကြွဖြစ်ပါသည်, နက်ရှိုင်းသောလူမည်းနှင့်မြတ်သောကြည့်ရှုထောင့်နှင့်အတူ. လည်းတိုက်ရိုက်နေရောင်ထဲမှာဖတ်ရှုဖို့အတော်လေးလွယ်ကူဒါဟာင်, ကစမတ်ဖုန်းတွင်တပ်ဆင်ကိုအကောင်းဆုံး display တွေထဲကတစ်ခုအောင်, Samsung ရဲ့အကောင်းဆုံးအဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်မကောငျးပေမဲ့.
Screen ကို: 51080p AMOLED အတွက် (441ppi)
သိုလှောင်ခြင်း: 32 သို့မဟုတ် 128GB
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Android မှာ 7.1 Nougat
ကင်မရာကို: 12.3လွှတ်တော်အမတ်နောက်ဘက်ကင်မရာက, 8အမတ် front-facing ကင်မရာကို
ဒိုင်မန်းရှင်း: 143.8 x က 69.5 x က 7.3-8.6 မီလီမီတာ
Google ရဲ့ Pixel ဆဲနားကြပ်ပေါက်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ် box ထဲမှာဆိုနားကြပ်နှင့်အတူမလာပါဘူး. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Pixel Qualcomm ရဲ့ Snapdragon အသစ်သုံးစွဲဖို့ပထမဦးဆုံးဟန်းဆက်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည် 821 Processor ​​ကို, တကယ်တန်းတစ်ဦး tweaks ဗားရှင်းသောဖြစ်ပါသည် 820 ထို၌တွေ့ OnePlus3နှင့်အခြားစမတ်ဖုန်းများ.
စွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး. Prisma ပုံရိပ်တွေထဲကနေသူ့ကို graphically အထူးကြပ်မတ်ဂိမ်း, ငါကမှာပစ်ချအရာအားလုံးအားဖြင့်ဝါးအ Pixel, သင်တစ်ဦး£ 600 စမတ်ဖုန်းများအတွက်မျှော်လင့်ထားချင်ပါတယ်သော. ဒါဟာလက်ရှိရရှိနိုင်အာဏာအရှိဆုံး Android စမတ်ဖုန်းများ၏တဦးတည်းရဲ့. ဒါဟာကောင်းစွာ optimized င်, snappy, အစာရှောင်ခြင်းနှင့်, ဖြစ်ကောင်းအများဆုံးအထင်ကြီးစရာကောင်းလောက်, ဒါကြောင့်လာသောအခါဝန်အောက်မှာကပူရပါဘူး.
ဒေတာတွေအများကြီးကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရသောအခါအများစုဟာစမတ်ဖုန်းသိသိသာသာတက်အပူ, ထိုကဲ့သို့သောဖုန်းကိုဖွင့် setting သကဲ့သို့, ဒါပေမယ့် Pixel အမှုကိုမပြု. ဒါဟာအစနည်းနည်းလေးတက်အပူမပါဘဲထိုကဲ့သို့သောဒန်အဖြစ်ဂိမ်းများကိုလူသို့ပွေးလေ၏, ဘယ်မှာပြီးခဲ့သည့်နှစ် ကို Nexus 5x သိသာပူဖြစ်လာခဲ့သည်.
အဆိုပါ Pixel လည်း Google ၏အသစ်နှင့်အတူအသုံးပြုမှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ကိုပထမဦးဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ် virtual reality ပလက်ဖောင်းစိတ်ကူးယဉ်. ကအဖြစ်မှန်အတွက်ဘာမှကိုဆိုလိုသည်ပဲဖြစ်ဖြစ် VR များအတွက် Google ရဲ့နောက်ဆုံးတွန်းအားပေးဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ပုံကိုအောင်မြင်တဲ့အပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာမရရှိသေးပါဘူး, ဒါကြောင့်လုပ်ဆောင်ပုံကိုမသိရသေးပေ.
အောက်ခြေမှာအ USB နှင့်တစ်ခုတည်းပီ (လက်ဝဲ-ဘက်အပေါက်). ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အကြှနျုပျ၏မူလတန်း device ကိုအဖြစ် Pixel အသုံးပြုခြင်း, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုကျော်ကြာမြင့် 24 အားသွင်းစရာမလိုဘဲနာရီ, app ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်ကြည့်ရှုခြင်း၏သုံးနာရီကိုစီမံခန့်ခွဲ, အီးမေးလ်များနှင့်တွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာများရာနှင့်ချီ, ဓါတ်ပုံများ၏စုံတွဲတစ်တွဲ, ငါးကို Bluetooth နားကြပ်ကျော်ဂီတ၏နာရီနှင့်များ၏ထူးဆန်းဂိမ်း ဒန်လူ အလုပ်ဖို့နဲ့မှငါ့တစျနာရီနှင့် 20 မိနစ်ကြာရထားအသွားအပြန်စဉ်အတွင်း. ဒါဟာသင်တစ်ဦးနေ့နှင့်ထွက်တညဉ့်ကတဆင့်ရလိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်, သငျသညျနက်ဖြန်နေ့၌အလုပ်လုပ်ရမီကသျောလညျးသငျနေ့ချင်းညချင်းကအားသွင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်အများဆုံးဖွယ်ရှိသေဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ရှိသည်လိမ့်မယ်.
အဆိုပါ Pixel အစာရှောင်ခြင်း, USB-C ရဲ့အာဏာကိုပေးအပ်ခြင်းသတ်မှတ်ချက်အားဖြင့်အားသွင်းခဲ့သည်, မ Qualcomm ၏ QuickCharge သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရှိန်မြှအားသွင်းစနစ်က. လုံးဝပြားချပ်ချပ်မှတစ်ဦးကအပြည့်အဝတာဝန်ခံတစျနာရီကိုယူ 45 မိနစ်, ရောက်ရှိ 25% အကြောင်းအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် 15 မိနစ်, 40% တွင် 25 မိနစ်နှင့် 66% အကြောင်းထဲမှာ 50 မိနစ်. ဒါဟာရရှိနိုင်အမြန်ဆုံးအားသွင်းစမတ်ဖုန်းမဟုတ်င်, ဒါပေမယ့် Apple ရဲ့ iPhone ကိုထက်သိသိသာသာပိုမြန်မယ့် 7.
Android မှာ 7.1 Nougat
pixel အသစ်တစ်ခု-ကြည့်ရှုပင်မမျက်နှာပြင်နဲ့ app အံဆွဲနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံ Google ရဲ့နောက်ဆုံး launcher နှင့်အတူ install လုပ်ဖြစ်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Pixel က Android ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းနဲ့အတူလာ 7.1 Nougat နှင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုပထမဦးဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်. အများစုမှာအခြားစမတ်ဖုန်းများနေဆဲ Android ကိုပြေးနေကြတယ်6Marshmallow, တယောက်တည်းဗားရှင်းပါစေ7သို့မဟုတ် 7.1.
Android မှာ 7.0 Nougat တချို့အစိုင်အခဲဘက်ထရီနှင့်အချိန်ချွေတာ features တွေကိုမိတ်ဆက်, သော Pixel ပေါ်မှာရှိသမျှပစ္စုပ္ပန်များမှာ. Nougat ၏ Google ရဲ့ဗားရှင်း 7.1 မနှောက်ယှက်ပါလာသောအခါအမြင်အာရုံသတိပေးချက်ပိတ်ဆို့ဖို့စွမ်းရည်အပါအဝင်အနည်းငယ်ပိုပြီးအသစ်နှင့်အသုံးဝင်သောအမှုအရာ activated ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆက်, နေ့ချင်းညချင်းနောက်လာမည့်မိမိတို့ခေါင်းပေါ်မှ၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းအားသွင်းသောသူတို့သည်လည်းထိုအဘို့နေရာလေးကို - အတောက်ပအကြောင်းကြားစာအလင်း LED ကဲ့သို့သော.
ယခင်က Google Now က launcher အဖြစ်လူသိများ - - အ Pixel လည်း Google ၏ Launcher ရဲ့ဗားရှင်းအသစ်ရှိတယ်ကို Nexus ထုတ်ကုန်နှင့်အတူတင်ပို့ရာနှင့်အခြားများအတွက်ရရှိနိုင် Play Store ကိုအပေါ်ကို Android စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet များ. အဆိုပါ Pixel ရဲ့ launcher အသစ်တစ်ခု-ကြည့်ရှု Google က search bar နဲ့ home screen ကရာသီဥတုဝစ်ဂျက်ရှိပါတယ်, လေးတန်းမှဒေါင်လိုက် icon ကိုအာကာသကန့်သတ်ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်မဟုတ်သော, ယခုမျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်ငါး-icon ကို-ကျယ်ပြန့်ဗန်းကနေပွတ်ဆွဲဖွင့်နောက်ကွယ်မှ app ကိုအံဆွဲဖုံးကွယ်.
launcher shortcuts တွေကိုတစ်ဦးကိုထိပုတ်ပါအပေါ် pop-up နဲ့ကိုင်, ဒါပေမယ့်ပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ shortcut ကိုတစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံထား icon ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ menu မှဆွဲငင်နိုင်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အိမ်တွင်မျက်နှာပြင်များအတွက်အကြီးမားဆုံးအလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲ, သို့သော်, အသစ်ဖွင့်တင်ပေး shortcuts တွေကိုဖြစ်ပါသည်, သောက iOS အပေါ် Apple ရဲ့ 3D ထိတွေ့မူအယာများ mirror, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးဖိအား-ထိခိုက်မခံတဲ့မျက်နှာပြင်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲ. app တစ်ခု icon ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်ကိုင်အမြန်လုပ်ရပ်များ၏စာရင်းကိုပေါ်လာ, တိကျတဲ့လူမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှမကြာသေးမီကစာသားမက်ဆေ့ခ်ျမှ, ရွေးချယ်စရာကင်မရာ app ထဲမှာတစ်ဦး selfie သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖြောင့်ခုန်ဖို့, နှင့်အခြားအလားတူ functions တွေ.
အဆိုပါ launcher shortcuts တွေကိုအိမ် screen ပေါ်မှာအမြန်ခလုတ်ဖို့အဓိက app ကိုမှလည်းဆွဲငင်နိုင်ပါတယ်, တစ်ဦး selfie များအတွက် front-facing ကင်မရာဖြောင့်ခုန်ဘို့ခလုတ်တစ်ခုအဓိပ်ပာယျတစျကိုထိပုတ်ပါဝင်ရောက်ခွင့်များအတွက်အိမ်တွင်း screen ပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုထားရှိနိုင်ပါသည်.
Google ရဲ့ app များကိုအများစုမှာ feature အသစ်ထောကျပံ့, စဉ်အချို့ Third-party apps များ, Evernote မကြာမီမိမိတို့အလျင်မြန်လုပ်ရပ်ထည့်သွင်းဖို့ updated လိမ့်မည်အပါအဝင်. ဘယ်လောက် utility ကိုသငျသညျသူတို့အထဲကရသင်အသုံးပြုသော apps အပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ပင်မမျက်နှာပြင်မှသီးခြားအိုင်ကွန်အဖြစ် launcher လုပ်ရပ် pin နိုင်ဖြစ်ခြင်းအချို့သောအသုံးအများဆုံး functions တွေအဘို့အအသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိစဉ်အခါ Google ရဲ့လည်းစစ်မှန်သောအချိန်အတွက်ပြောင်းလဲရန်ကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုထည့်သွင်း. Google Earth ကိုတစ်ဦးစုဆောင်းမှု Kent သို့မဟုတ်ရောမမြို့အတွက် Pantheon အတွက်လယ်ကွင်းတစ်ဦးအမြင်တစ်ဝှမ်းရိုက်ချက်များဒယ်အိုး, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဒေတာနောက်ခံပုံဘက်ထရီအားသွင်းအဆင့်ဆင့်ကိုပြသနေစဉ်, လက်ရှိရာသီဥတုအခြေအနေများ, ဒါမှမဟုတ်အချိန်. ထိုကဲ့သို့သောနပေုံအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများများအတွက်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာနေဆဲပုံရိပ်တွေ၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုအားဖြင့်သံသရာမှ option ကိုလည်းဖွင့်, ဝေဟင်ရိုက်ချက်များ, ရှုခင်းများနှင့်အခြား themes များ.
Android မှာ 7.1 ဒါ့အပြင်ယခု built-in ညဉျ့အခါ mode ကိုရှိပါတယ်, မှောင်မိုက်နာရီအတွင်းမျက်စိကိုသို့အပြာရောင်အလင်းထွန်းပ၏ပမာဏကိုကန့်သတ်ထားရန် display ကိုမှပြာပြာတန်ချိန်လျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သော. လုပ်နေတာဒါကြောင့်စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများအကြှနျုပျတို့မကျြစိထဲမှာအလင်းကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ဆဲလ်၏အပြာလှိုင်းအလျားရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုနှိုးထခြင်းဖြင့်အိပ်ကိုကူညီဖို့ရည်ရွယ်သည်. third-party apps များခဏတစ်များအတွက်အလားတူအကျင့်ကိုကျင့်ခဲ့ကြနှင့် Apple iOS ကိုမှတညဉ့် mode ကိုပြောသည် 9.3, ဒါကြောင့်တစ်ဦး feature အသစ်မဖွင့်, ဒါပေမယ့်အန်းဒရွိုက်သို့ built ကြည့်ဖို့ကောင်းလှ၏.
Google ကလက်ထောက်အိမ်တွင် button ကိုအောက်တွင်ဖုံးကွယ်, မေးခွန်းတွေကိုဖြေဆိုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတိုင်မား setting အဖြစ်အခြေခံစနစ်ဖျော်ဖြေဖို့အဆင်သင့်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အန်းဒရွိုက်၏ Google ရဲ့ဗားရှင်းသစ်၏ဆုံးဖောင်းပွအင်္ဂါရပ် Google ကလက်ထောက်, ယခင်က Google Now ကိုလူသိများ. အကြီးမားဆုံးကွာခြားချက်သည်သင်တို့အားပြန်ပြောမည်ယခုနှင့်စကားပြောဆိုမှုစကားသံကိုအပြန်အလှန်အပေါ်အများကြီးပိုပြီးအာရုံစိုက်သည်. သင်တစ်ဦးမေးခွန်းမေးပါ, ထိုသို့ဖြေကြားသော်လည်းနောက်ဆက်တွဲ command ကိုဒါမှမဟုတ်ဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်. ထပ်မံမေးခွန်းတွေကိုအဘို့ကိုနားထောငျစောင့်ရှောက်.
အိမ်တွင်ခလုတ်ကိုအပေါ်တစ်ဦးရှည်လျားသောစာနယ်ဇင်းတစ်ခုခုသို့မဟုတ် OK ကို "ဟု activated, Google က ", လက်ထောက်ထိုကဲ့သို့သောတိုင်မား setting အဖြစ်အမြန်တာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်, မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ခြင်းနှင့်ဂီတကစား, ရှာဖွေမှုများနှင့်အခြားစံကို virtual-လက်ထောက် functions တွေတက်ပစ်ခတ်, ဒါပေမယ့်လည်းယနေ့အထိအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေး Google ကလက်ထောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာတက်ကြွစွာသင့်ရဲ့ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုကနေလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်, သင့်ရဲ့ရှာဖွေမှုများကိုအားဖြင့်သို့မဟုတ်သင့်တွင်အကဲဆတ်သော command ကိုအားဖြင့်လည်းကောင်း.
အသုံးပြုသူများသည်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့် Android စမတ်ဖုန်းများအတွက်, လက်ထောက်တာရှင်းလင်းအမည်ဖြင့်ယခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အနည်းငယ်ပိုကောင်း Google ကဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းရရှိနိုင်ဆုံးနိုင်စွမ်းစကားသံကိုလက်ထောက်တဦးရဲ့နှင့် Apple ၏ Siri အချိန်ကာလနောက်ကွယ်မှနည်းနည်းကြည့်ရှုစေသည်. Google ရဲ့စကားသံကိုအသိအမှတ်ပြုမှုထိပ်တန်းထစ်ဖြစ်ပါသည်, ကတဲ့အခါတတ်နိုင်သမျှထက်တစ်တကယ်တော့-based မေးခွန်းမဖြေနိုင်တဲ့အခါပိုပြီးအံ့သြစရာင်ဒါအများကြီးပိုဒေတာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်.
pixel, Google ကဖုန်းကို. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဒါဟာပုံနောက်ဆုံးမှာအသုံးပြုသူများကရိုးရိုး OK ကို "ဟုပြောခွင့်ပြု Third-party apps များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုင်ပါလိမ့်မည်, Google က, တစ်ဦးကတော့ Uber "သို့မဟုတ်အလားတူငါ့ကိုအမိန့်, ဒါပေမဲ့သူတို့မရရှိသေးမဟုတ်ပါဘူး. သင်တို့သည်လည်းသာတိုက်ရိုက် launcher ကနေစကားသံကိုမှတဆင့်လက်ထောက်နှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်က Google search bar သို့သို့မဟုတ် Allo အတွက်စာသားကိုရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်. ဒါဟာထူးဆန်းပျက်ကွက်သလိုပဲ, ငါတိတ်တဆိတ်ကီးဘုတ်သုံးပြီးကမေးခွန်းမေးရန်လိုခငျြသညျ့အခြိနျအခါရှိခဲ့အဖြစ်.
ရဖို့ကထဲကအများဆုံးကိုသင်က Google ရန်သင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဝကျော်ပေးရမည်နှင့်ဆက်ဆက်အချို့ privacy ကိုသက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ် - သင်တို့နေရာကသိတယ်, သင်သည်အဘယ်သို့ရှာဖွေနေပါတယ်, မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဘာဖတ်သမျှဒေတာ collates နိုင်သည် - သို့သော်သစ်တစ်ခုဖြစ်ရပ်ဆန်းမဟုတ်ပါဘူးနှင့်ရိုးရိုး Google ရဲ့ Android အပေါ်နှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးဇနီးမောင်နှံနှစ်များအတွက်လုပ်နေတာဖြစ်သောအရာကိုတစ်တိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်. သင်တို့အားအရေးပါပဲဖြစ်ဖြစ်သင်က Google ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်. သငျသညျလက်ထောက်ကိုသုံးစရာမလို, ကပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်.
Google ကလက်ထောက်၏အစစ်အမှန်ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော, သို့သော်, သင်ကနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘယ်မှာမကိစ္စဖြစ်ပါသည်, ကတူညီတဲ့လက်ထောက်င်. ဗြိတိန်နိုင်ငံအသုံးပြုသူများအဘို့အပစ်စယ်လ်ဖုန်းနှင့် Google ၏ Allo app ကိုနှစ်ခုသာသောနေရာများဖြစ်ကြောင်းလက်ထောက်တက်ကြွစွာအပြန်အလှန်ရရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမဲ့အမေရိကန်အသုံးပြုသူများအားလည်း Google ပင်မကိုဝယ်ခြင်းငှါစွမ်းနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်, တစ်ဦးအမေဇုံ: Echo ပြိုင်ဘက်. မူလစာမျက်နှာလည်းလာမည့်နှစ်တွင်အင်္ဂလန်မှလာကြလိမ့်မည်.
Google ကလက်ထောက်အ AI အစစ်ပွဲများအတွက်ရှေ့ဆက်မယ့်ဧရာမခြေလှမ်းမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်စကားပြောဆိုမှုလက်ထောက်ရဲ့နောက်အဆင့်အတွက် Google အတွက်တစ်ဦးအစိုင်အခဲစတင်ဖွင့်. သင်ကသိနှင့်ဖုန်းအကြောင်းအရာခပ်သိမ်းကိုပြုနိုင်မှမျှော်လင့်နေတယ်ဆိုရင်, သင်၏အသက်တာနှင့်အခြားအမှုအရာတစ်ဦးအသားကို-and သှေးကိုကိုယ်ရေးလက်ထောက်အစွမ်းသတ္တိ, သငျသညျစိတျပကျြဖြစ်လိမ့်မယ်.
ထိုအကြောင်းကြားစာအရိပ်ချပွတ်ဆွဲနေတဲ့ pad ပါအဖြစ်ကျော Doubles အပေါ်လက်ဗွေစကင်နာ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Google က Nexus ဖုန်းတွေနောက်ကျောအပေါ်တောက်ပလက်ဗွေစကင်နာခဲ့. အဆိုပါ Pixel တူညီသောစံချိန်ဖော်မြူလာကိုအသုံးပွုဖို့ဆက်လက်: ဒါကြောင့်အစာရှောင်င်, တိကျမှုနှင့်ယခု pad ပါအပေါ်တစ်ဦးပွတ်ဆွဲတွေနဲ့အကြောင်းကြားစာအရိပ်ခေါ်ခဲ့ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည် - ဟွာဝေးအပါအဝင်အခြားထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့အကျင့်ကိုကျင့်ကြပြီအရာတစ်ခုခုကို. အဆိုပါ Pixel Imprint လုပ်ကင်နာများငြင်းခုံဖွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်, သင်မူကားတစ်ဦးစားပွဲခုံပေါ်တွင်သင်၏ဖုန်းကိုအသုံးပြုလျှင်, သင်ကတက်ကောက်နေမပါဘဲက activate မနိုင်.
ကင်မရာ app ကိုအနည်းငယ်ပိုပြီးခေါင်းလောင်းနှင့်စီများမှုတ်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် Samsung မှ Third-party ကကင်မရာ app များရှိသည်ကျယ်ပြန့်လက်စွဲထိန်းချုပ်မှုရှိသည်ပါဘူး, ဟွာဝေး, LG ကနဲ့တခြားသူတွေ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Pixel ရဲ့ 12.3-megapixel ကင်မရာနှိမ်နင်းသည်. ကင်မရာ rating ကုမ္ပဏီ DxoMark အနည်းငယ်အားလုံးအခြားစမတ်ဖုန်းကင်မရာအထက်ကအဆင့်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်, အဲဒါကိုနှင့်အတူအမှိုကျဓာတ်ပုံကိုယူရန်အလွန်ခက်ခဲင်အဖြစ်.
ကောင်းသောအလငျး၌သငျသညျပြတ်သားရ, ဒဏ်ငွေအသေးစိတ်တစ်ခုမြတ်သောငွေပမာဏနှင့်အတူကောင်းစွာစီရင်ခြင်းကိုခံရဓါတ်ပုံ. Google ရဲ့ HDR + feature ကိုအထူးသဖြင့်ကောင်းလှ၏, ငါသိမြင်ဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးမြင့်မားတဲ့ dynamic range ကိုဓာတ်ပုံများနှင့်အခြားစနစ်များဖြင့်ပုတ်နိုငျသောပုံရိပ်မှုန်ဝါးခြင်းမရှိဘဲအချို့ထုတ်လုပ်.
အနိမျ့သူနှင့်ဆင်းရဲသောအလင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းမြတ်သောဖြစ်ပါသည်, ကင်မရာနေသော်လည်း optical image stabilization ရှိခြင်းမဟုတ်, Google ၏ကင်မရာ app ကိုယခုအချို့သောအများကြီးလိုအပ်နေအပို features တွေရှိပါတယ်စဉ်, ခလုတ်တစ်ခု၏အသာပုတ်တွေနဲ့အလိုအလျောက်အဖြူချိန်ခွင်လျှာပြောင်းနိုင်စွမ်းနှင့်ရွှေအချိုးဇယားကွက်အပါအဝင်, သောသင်သည်သင်၏ဓါတ်ပုံဘောင်ကူညီပေးသည်. အဆိုပါကင်မရာကိုမှန်ကန်စွာရုံးချောင်းအလင်းရောင်သိရှိနိုင်ဖို့ရုန်းကန်, သို့သော်, အဝါရောင်တင့နှင့်အတူပုံရိပ်တွေထွက်ခွာ. အချောင်းအလင်းရောင် option ကိုရွေးချယ်ခြင်းကတညျ့.
The back hasaglass panel covering the top third of the device. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
The charging meter is inaccurate: တွင် 96% it says four minutes until done but took 17 minutes to reach 100%
နှိုင်းယှဉ်, Apple ရဲ့ iPhone ကို7costs £599 with 32GB of storage, Samsung’s Galaxy S7 costs around £500, ထို ဟွာဝေး P9 £ 449 ကုန်ကျ ပြီးနောက် OnePlus3costs £329.
But the phone itself is only up to par with the best of the rest and not leagues ahead. The design isn’t as innovative or interesting as that produced by Samsung. It’s not waterproof, ဖြစ်စေ, and it doesn’t have expandable storage. The camera is great, so is the screen and the build quality is excellent, all things you’d expect froma£600 smartphone in 2016.
အကောင်းအဆိုး: အလွန်ကြီးစွာသောကင်မရာက, ကောင်းသောမျက်နှာပြင်,aday’s battery life, Android မှာ 7.1 Nougat, Google ကလက်ထောက်, အလွန်ကြီးစွာသောလက်ဗွေစကင်နာ
Cons: ရေစိုခံမ, no expandable memory, no front-facing speakers, အဘယ်သူမျှမကိုကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်, စျေးကြီး
A review of the larger Google Pixel XL witha5.5in screen, the smartphone competing with the iPhone ကို7နောက်ထပ် နှင့် Samsung ရဲ့ Galaxy S7 Edge, will be available next week
ဂုဏ် 8 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: Huawei’s cheaper smartphone is just short of brilliant
LG က G5 ပြန်လည်သုံးသပ်: ရုံအမှတ်လွဲချော်နေတဲ့အာဏာကိုအသုံးပြုသူရဲ့မိတျဆှေ
iPhone ကို7ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: ဘက်ထရီပင်တစ်နေ့လျှင်ကြာရှည်မပါဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်ကောင်းတစ်ဦးမှဖုန်းဖွစျနိုငျ?
အက္ခရာ, Android မှာ, ပန်းသီး, အပိုဒ်, Google က, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, pixel, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, Software များ, နည်းပညာ, တယ်လီကွန်း, ဗြိတိန်နိုင်ငံနည်းပညာ, Voice ကိုအသိအမှတ်ပြုမှု
← ဘယ် Keyboard ကိုနှင့်မောက်ငါ့ PC အတွက် Buy သင့်သ? ဟွာဝေး Mate 9: သင်အမှန်တကယ်တစ် 5.9in phablet Want ပါနဲ့? →